Android tsy manome fampandrenesana, tariby tapaka / mifandray | Androidsis
Efa nitranga taminao ve fa nandeha nitady ny Android-nao ianao, rehefa avy napetrakao hitaky vola ary hitanao io nefa tsy andoavanao vola satria tsy nampidirinao tsara ny tariby USB, ny charger dia tsy nifandray tamin'ny valin'ny rindrina na tapaka tampoka ny tariby ?.
Raha ENY ny valin'ireto fanontaniana ireto na karazana hafa, dia ho mora raisina ity lahatsoratra manaraka ity rehefa Homeko anao ny vahaolana maharitra mba tsy hitrangan'izany aminao intsony hatramin'ny fampiharana tsotra maimaimpoana ho hitanao izany rehefa tsy mavesatra ny Android anao satria tsy nifandray tsara ny tariby dia tapaka tampoka izy io na tsy tonga eo amin'ny terminal anao izao.
Ny rindranasa tiako hatolotra anio dia fampiharana izay, toy ny mahazatra, dia ho azontsika atao ny misintona avy amin'ny Google Play Store, fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android, amin'ity indray mitoraka ity Maimaimpoana tanteraka, tsy misy doka anatiny na fividianana rindrambaiko, ary tsy misy alalana fanararaotana na tsy ilaina noho ny fiasa marina.
Fampiharana iray izay mamaly ny anaran'ny Fanamarihana herinaratra izay azonao sintonina avy amin'ilay rohy mivantana avelako eo ambanin'ireto tsipika ireto ireto:
1 Sintomy ny Power Notifier maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
2 Fa inona no ataon'ny Power Notifier?
Sintomy ny Power Notifier maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Fa inona no ataon'ny Power Notifier?
Fanamarihana herinaratra dia rindrambaiko, na ny tena izy fitaovana ilaina ho an'ny Android, (izay heveriko fa tokony hapetraka ho fenitra amin'ny fitaovana Android rehetra); fitaovana iray izay hampandre antsika roa rehefa mampifandray ny charger Android-tsika, ary rehefa esorinay ny tariby avy ao aminy.
Amin'ity fomba tsotra sy tsotra alehantsika ity alao antoka fa mifandray toy ny tokony ho izy ny tariby ary mahatratra ny fitaovantsika ny entana, amin'ny fomba mitovy amin'izany Hampahafantatra antsika izy io rehefa misy antony tsy anesorana ilay tariby amin'ny Android na atsaharo ny fahatongavan'ny ankehitriny any amin'ny fitaovantsika.
Fampiharana iray mora mora ny mametraka azy fa mila manokatra azy fotsiny ianao, mariho ny safidy voalohany aseho amin'ny anaran'ny Alefaso ny fampandrenesana, ary avy eo dia hamita ny fikirakirana azy mifantina ny feo fampandrenesana rehefa mampifandray ny charger sy ny fampandrenesana na ny feo fampitandremana isika rehefa tapaka ny tariby amin'ny Android.
Ao amin'ny horonan-tsary efa navelako anao teo am-piandohan'ity lahatsoratra ity dia hazavaiko aminao ao anatin'ny roa minitra fotsiny izay rehetra atolotry ny fampiharana anay, ny fomba fananganana azy ary misafidy feo fanairana, ary koa asehoko anao ny ohatra iray momba ny fomba fiasan'ny fampiharana sy ny fampitandremana antsika rehefa mampifandray sy manaisotra azy amin'ny charger.
Tsotra sy mora izany amarino tsara fa mamaly tsara ny Android na, ny mifanohitra amin'izay, fantaro fa tsy mamaly ny Android anao, dia nijanona ny famoahana azy na ny fahatongavan'ny entana tsy tonga araka ny tokony ho izy noho ny antony rehetra notanisaiko etsy ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Android tsy mamaly fampandrenesana, tariby tapaka